Iza no Nanaisotra Ilay Takelaky ny Revolisiona 1932 tao Thailand? · Global Voices teny Malagasy
Iza no Nanaisotra Ilay Takelaky ny Revolisiona 1932 tao Thailand?
Voadika ny 24 Avrily 2017 6:45 GMT
Ilay takelaka varahina fahatsiarovana ny Revolisiona Siamoà tamin'ny 1932. Sary avy amin'i Prachatai, votoaty ifampizaràna amin'ny Global Voices.
Takelaka varahina iray manamarika ny toerana manan-tantara nanambaràna ny fiafaràn'ny 700 taona nanjakan'olon-tokana tsy refesimandidy tao Thailand no nisy nanaisotra tamin'ny fomba misitery tany ampiandohan'ity volana ity. Nosoloina takelaka iray vaovao manome voninahitra ny fitondràm-panjaka ilay izy.
Ilay takelaka, izay 30 santimetatra monja ny savaivony, dia fahatsiarovana ilay rà nandriaka tamin'ny 24 Jona 1932 izay nitondra an'i Thailand ho any amin'ny tetezamita rehefa niala tamin'ny fitondràm-panjaka tsy refesimandidy ho lasa fanjakàm-panjaka fehezin'ny lalàm-panorenana. Revolisiôna Siamoà no nahafantarana izay hetsika izay.
Nisy ity soratra ity ilay takelaka:
Teto amin'ity toerana ity, ny mangirandratsin'ny 24 Jona 1932, no naterakay Antokon'ny Vahoaka ny Lalàm-panorenana ho an'ny fandrosoan'ny Firenena.
Raha ilay takelaka vaovao manome voninahitra ny fitondràm-panjàka kosa misy ity soratra ity:
Ho ela velona mandrakizay anie Siam ! Ireo olompirenena faly, mbola anaty hery sy tanjaka no miatrika manorina ny tanjaky ny tany!
Tanisainy ihany koa ny teny fanevan'ny fanjakàn'ankohonana, izay ao amin'ny lapam-panjakàna ao Thailand amin'izao fotoana izao:
Tsara ny tsy fivadihana sy ny fitiavana ireo Vato Telo Sarobidy (Triple Gem), ny fianakaviamben'ny olona iray ary ny fanànana fo mendrika ho an'ny mpanjakany. Ireny no fitaovana hampiroboroboana ny fanjakany!
Maro ireo mpikatroka mihevitra ilay fanamarihana ho toy ny toerana iray nahaterahan‘ny demaokrasia Thai. Mpanakanto nasiônaly iray koa no mino fa tokony hoheverina ho harem-pirenena ilay takelaka. Saingy ireo hery mpiandany amin'ny mpanjaka misisika milaza azy iny ho fanompàna ny fitondràm-panjaka, izay faritan-dry zareo ho toy ny andrim-panjakana iray ankamamiana sy mampiray ny firenena. Ny sasany amin'ireo hery mpiandany amin'ny mpanjaka aza efa nandrahona mihitsy ny hanaisotra azy iny tamin'ny 2016.
Officially Tolerated Vandalism 4 Destruction Of Hist Monument -
1932 DEMOCRATIC REVOLUTION PLAQUE REMOVED#Thailand https://t.co/F96037z9vX pic.twitter.com/fRFAsQ2hrB
— Monty's Freedom (@MontySay) April 16, 2017
Fandrobàna ho Famotehana ny Tsangambaton'ny Tantarany, Noleferina tamin'ny fomba Ofisialy – NESORINA ILAY TAKELAKA FAHATSIAROVANA NY REVOLISIONA DEMAOKRATIKA TAMIN'NY1932
Hatramin'ny 1932, ampolony mahery ireo fanonganana nataon'ny tafika tao Thailand. 2014 ilay fanonganana farany izay nahitàna ireo lehiben'ny tafika nitazona ireo toerana ambony tao amin'ny governemanta. Ny praiminisitra ankehitriny dia lehiben'ny tafika taloha. Na nankatoavina aza ilay lalàm-panorenana vaovao, mitohy mifehy ny resaka fitantanana ihany ny tafika. Ary na tafaverina aza ny fitondràna sivily, vantany vao vita ny fifidianana, mbola hitohy hisy dindon'ny tafika hatrany amin'ny sehatra rehetran'ny fitantanana, ireo fiantohana omen'ilay lalàm-panorenana vaovao.
Hatramin'ny 2014 nahatongavany teo amin'ny fahefana, nitratrevatreva tamin'ny fisamborana olona nampangaina ho manompa ny mpanjaka ilay governemanta tohanan'ny tafika. Inoan'ireo mpanakiana fa ilay lalàna momba ny Fanivaivàna Mpanjaka (manenjika ny fitenenan-dratsy ny mpanjaka) no ampiasain'ny tafika mba hanemporana ireo mpanohitra sy mpikiakiaka ny hamerenana ny demaokrasia ao Thailand.
Tsy nisy nilaza ho tomponandraikitra tamin'ny fanaisorana ilay takelaka. Saingy ahian'ny sasany ho ilay governemanta tohanan'ny tafika no mety nanome tohana satria tsy azo eritreretina mihitsy ny hahafahana manolo ilay marika nefa tsy hisy hahita, ilay izy rahateo eo aminà toerana iray be mpandalo amin'ny sampanana iray ao Bangkok, renivohitry ny firenena. Nandà io fiampangàna io ireo manampahefana.
Tsy sambany izao no nisy nanendaka takelaka fahatsiarovana ny revolisiôna 1932. Tamin'ny 2014, tsangambato iray no nopotehan'ny governemanta tany avaratr'i Thailand.
Ny bilaogy Gadra Politika ao Thailand, izay mpanakiana ny (junta) fitondrà-miaramila, dia miampanga ny governemanta ho nanohana ireo izay nanendaka ilay takelaka:
Aza diso hevitra, fandrobàna ara-politika io, nataon'ny rantsana iray izay mahatsapa fa mametraka ny fizotry ny zavatra rehetra ho araka ny ‘natiora’ eto Thailand, manilika izay sisa tavela tamin'ny 1932.
Nasehon'ny junta fa ampahany amin'io fanehoankevitra mpisolelaka amin'ny mpanjaka io ilay izy, nifototra tamin'ny hetaheta hamafa ny raharaha 1932.
Maro ireo mpampiasa Twitter no naneho fahatohinana tamin'ny fanendahana ilay takelaka fahatsiarovana. Ny sasany aza naniry mihitsy ny hanendahana avy hatrany ilay takelaka vaovao:
@rosarinmo @PravitR There is no place for a fake. It should be removed and melt down immediately.
— YoshiO (@YoshiOhbaya) April 16, 2017
Tsy misy toerana ho an'ny sandoka. Tokony ho endahana eo sy hatsonika avy hatrany io
Military regime said no idea who stole Revolutionary Plaque yet not rushing to investigate & catch thieves. More than suspicious! #Thailand
— Pravit Rojanaphruk (@PravitR) April 16, 2017
Nolazain'ny fitondrana miaramila fa tsy hainy izay nangalatra ilay Takelaky ny Revolisiôna, no sady tsy rototra hanao fanadihadiana & hisambotra ireo mpandroba. Be lavitra ny ahiahy
@KhaosodEnglish Removal of the 1932 plaque is an ironic reminder that Thais may have ended absolute monarchy in 1932 but absolute dictatorship exists today.
— JQ Public (@JQP6) April 15, 2017
Fampahatsiahivana feno eso ho an-dry zareo Thais ny nanendahana ilay takelaky ny 1932, hoe mety natsahatr'izy ireo ny fitondràm-panjaka tsy refesi-mandidy, saingy mbola misy hatrizao ny jadona tsy refesi-mandidy.
Nisy fanangonana soina natomboka ety anaty aterineto nitakiana amin'ny governemanta mba hitady ilay takelaka sy hanasazy ireo izay nanimba ny endrik'ilay marika ara-tantara.